Imifino | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Uhlu lwezigaba kanye nezinhlobonhlobo ze-primroses
Izinhlobonhlobo zezinhlobo ze-primrose zithinta kokubili inani lezilwane nezinhlobonhlobo zezimbali zemibala. Lolu hlobo lubandakanya izinhlobo ezingu-550, futhi umsebenzi ososayensi ekuzaleni izinhlobo ezintsha awuyeki. Ukuze ubuyekeze umyalelo kule ningi, kubalulekile ukwahlukanisa izinhlobo zokuqala zibe yizigaba. Ngamunye wabo uhlanganisa izinhlobo ezifana nezici ezithile.
Ukumisa i-zucchini ekhaya: ukuthi ungalungiselela kanjani ubusika, yini engenziwa ngabo
I-Zucchini ngumkhiqizo owusizo wokudla onomthamo ocebile we-vitamin kanye nokunambitheka okuhle kakhulu. Kuzobaluleka ekudleni kwakho, uma ukhetha ukudla okunempilo nokuhle okutshala. Yiqiniso, iningi le-zucchini elisha lingadliwa kuphela ngenkathi yehlobo, futhi ukuze ujabulele ukunambitheka kwemifino yonke unyaka, abesifazane abaningi basekhaya bahlela amalungiselelo: imifino ekheniwe namasaladi, ama-marinades ngisho ne-jam jam.
Imiphi imifino engomiswa ebusika
Ukungabi namavithamini wemvelo kuthinta kakhulu umzimba womuntu ngesikhathi sebusika. Ukungabi khona kwelanga, imifino kanye nezithelo ezintsha kuholela ekunciphiseni amasosha omzimba, ukutholakala kwamavithamini kanye nengozi eyengeziwe yokuthola izifo ze-ARVI. Kodwa-ke, ubuchwepheshe bwanamuhla benza kube lula, ngisho nangenkathi ebandayo, ukuthola inani elanele lezinto eziwusizo - isibonelo, kusukela ezitshalweni ezomile.
Yini i-turnip ewusizo futhi eyingozi
Naphezu kokuthi i-turnip ingenye yezihlobo eziseduzane ze-turnips kanye nama-radishes, abantu abambalwa abakhulisa emasimini abo, bengazi ngisho nangezinzuzo ezinkulu ezingakuletha emzimbeni. Sinikeza ukujwayelana nazo zonke izakhiwo zalesi sizinda kanye namathuba okusetshenziswa kwawo ezinhlokweni ezihlukahlukene zokuphila.
Imifino ehlanganisiwe ebusika: 3 super-fast-zokupheka
Uma uthanda ukudla okusemathinini, kungenzeka ukuthi ubhekene nenkinga yokukhetha ukuthi yikuphi imbiza okuyoyivula namhlanje, ukuthi ungathanda yini ngaphezulu - ukhukhamba noma utamatisi, ukuthi imifino ingcono ihlangene namazambane (okusanhlamvu, i-pasta, njll). Ukuqeda, ungalungisa umshini, usebenzise imifino ehlukahlukene ethanda.
Yimiphi imifino yemifino futhi isebenza kanjani?
Ijusi elisha liyisiqalo esihle usuku. Okungenani lokho yimibono evunyelwe ngokuvamile. Leziphuzo zikhanya kakhulu, ezihlwabusayo, ziphilile, zijabulisa kumnandi - siyajabula ukuzifaka ekudleni kwakho futhi sibheka lokhu okulungile. Noma kunjalo, isayensi ayimi, futhi izifundo zamuva zithi konke akulula.
Ungayipheka kanjani ama-salad okudla okuklabishi? Ukupheka, ama-calories, ukukhonza izithombe
Incazelo ye-May Day ukukhulelwa kwezinkukhu
I-Ageratum - izimbali ezinephunga elimnandi
Izizathu eziyinhloko zokuthi amahlamvu e-begonias awomile
Ukulima kahle nokunakekelwa kwe-fuchsia engadini
Izici zokutshala izithombo kumgadi wekhalenda wezinyanga zenyanga kanye nesigadini
Indlela yokukhetha indaba yokubheka imibhede
Okuthandayo kwabalimi abaningi bemifino yiPhupho likaTamatisi Lazy: incazelo ehlukahlukene, izici zokuvuna nokulima